MTZ-1221: TILMAAMAHA IYO FARSAMOOYINKA FARSAMADA EE CAGAF-QAADAHA - MASHIINKA BEERAHA
Tixgeliyaha taraafikada MTZ 1221 (haddii kale, "Belarus") sii deynaya MTZ-Holding. Tani waa qaabka labaad ee ugu caansan ka dib markii taxanaha MTZ 80. Naqshadda guuleysiga, farbarashada ayaa baabuurkan u oggolaanaya inuu sii joogo hogaamiyaha fasalka uu ka yahay waddamada USSR hore.
Tilmaanta iyo isbeddelka cagajiidka
Mashruuca MTZ 1221 waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay cufan dalagga beeraha. Fasalka 2aad. Iyadoo loo eegayo fursadaha kala duwan ee fulinta iyo qalabyada kala duwan iyo qalabka raadraaca, liiska shaqada la qabtay ayaa aad u ballaaran. Ugu horreyntii, waa shaqo beereed, iyo sidoo kale dhismaha, shaqada dawladda hoose, dhirta, gaadiidka alaabta. Waxaa laga heli karaa sida isbedelka:
MTZ-1221L - xulashada warshadaha kaynta. Waxay samayn karaan shaqooyin gaar ah - geedo beeri ah, ururinta kabo, iwm.
MTZ-1221V.2 - isbeddel dambe, farqiga ayaa ah boosteejada kumbuyuutarka ee dib loo celin karo oo leh awood u leh inuu u leexiyo kursiga shirkadda iyo pedallinka twin. Tani waa faa'iido leh markaad la shaqeyneyso unugyada kor ku xusan.
MTZ-1221T.2 - oo leh shaashadda nooca shaashadda.
Waxyaabaha kale ee isbeddelka, oo lagu garto awood korodh.
Ma taqaanaa? Qaabka ugu horeeyay MTZ 1221 waxaa la sii daayay 1979-kii.
Dhaqdhaqaaqa MTZ 1221 wuxuu isu taagay sidii mashiinno la isku halleyn karo, tayo sare leh oo si fudud loo isticmaali karo.
Aaladda iyo noodaha waaweyn
Ka feker waxoogaa faahfaahin ah qaybaha waaweyn iyo qalabka MTZ 1221.
Tilmaamkan waa wheel wheeled tractor. Taasi waa, dildilaaca qorshaysan ayaa lagu rakibay gawaarida hore. Gawaarida hore - yar yar, gadaal - waaweyn. Waa suurtogal in la rakibo gawaarida gawaarida. Tani waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhulka, waxay kordhisaa maneuverability and maneuverability of the machine.
Qaabka 1221 waxaa lagu rakibay mashiinka naaftada D 260.2 130 l. c. Mashruucan lix-bylinder ah oo leh meeleynta gudaha ee dhululubada ayaa leh miisaan 7.12 litir, oo aan qabin shidaalka iyo saliidaha.
Mishiinkan waxaa lagu kala saaraa kalsoonida iyo fududaynta dayactirka. Qaybaha qaybaha iyo qaybaha mishiinka ma aha wax yar, waana ay fududahay in la helo.
Waa muhiim! Mashiinka wuxuu si buuxda u waafaqsan yahay heerarka caalamiga ah ee cimilada iyo amniga.
Isticmaalka shidaalka MTZ 1221 - 166 g / hp hal saacad Isbedelka dambe waxaa lagu dhammaystiraa makiinadaha D-260.2S iyo D-260.2S2.
Farqiga u dhexeeya iyaga iyo qaabka ugu weyni waxay ku jiraan kororka 132 iyo 136 hp. siday u kala horreeyaan, ka hor 130 hp qaabka aasaasiga ah.
MTZ 1221 gawaarida loogu talagalay 24 gaari wadida (16 hore iyo 8 gadaal). Qodobka danbe waxaa lagu qalabeeyaa diyaargarowga iyo kala duwanaanta (oo leh saddex nooc "on", "off", "automatic"). Mishiinka korontada ayaa lagu rakibay qaybta laba-xawaarida ah, oo leh wakhti go'an ama mid madaxbannaan.
Xawaaraha sare - min 3 ilaa 34 km / h, dhabarka - laga bilaabo 4 ilaa 16 km / h
Nidaamka hiddaha ee qaabka lagu qeexay wuxuu u adeegaa si loo xakameeyo shaqada iyadoo la adeegsanayo unugyo lakulmay iyo kuwo la fuushay.
Baro sida loo fududeeyo robot si aad u dhisto tareen yar oo leh gacmahooda.
Waxaa jira laba ikhtiyaar Nidaamyada hidaha:
Iyadoo laba godood oo qumman.
Iyada oo leh dhexdhexaadiye gawaarida gawaarida hareeraysan.
Qeyb kasta oo ka mid ah nidaamka hidda, waxaa suurtagal ah in la hagaajiyo xoogga iyo meesha qalabka.
Dukaanka iyo maamulka
Goobta shaqada waxaa laga sameeyaa farsamooyinka birta. Shaqada raaxada leh waxay bixisaa shaashadda qorraxda iyo qiiqa. Xakameynta waxaa loo adeegsadaa boostada oo loo yaqaan 'right operator' iyo boosteejo dheeraad ah oo ku jirta shaashadda sare ee cabirka. Laga soo bilaabo hagaajinta boostada shidaalka, qalabka korontada korontada ayaa la fuliyaa.
Soo saaraha MTZ 1221 ayaa bixiya astaamaha asaasiga ah:
Cabbirada (mm) 5220 x 2300 x 2850
Goobidda dhulka (mm) 480
Nadiifinta beeraha, ma yarayn (mm) 620
Rugta ugu yar yar (m) 5,4
Cadaadiska dhulka (kPa) 140
Miisaanka shaqada (kg) 6273
Miisaanka ugu badan ee la oggol yahay (kg) 8000
Awoodda shidaalka (l) 160
Isticmaalka shidaalka (g / kW saacadiiba) 225
Naqshad Qalabka saliidda la shaqeeyo
Cab Mideysan, leh kuleyliye
Xakamaynta tooska ah Hydrostatic
Macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah waxaad ka heli kartaa bogga rasmiga ah ee MTZ-Holding.
Waa muhiim! Tilmaamaha gaarka ah ee qaabka aasaasiga ah ee cagaf-qaadaha. Waxay ku kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran isbeddelka, sannadka soo saarista iyo soo saaraha.
Isticmaalka MTZ-1221 beeraha
Dhexdhexaadintu waxay u oggolaaneysaa in loo isticmaalo shaqooyin kala duwan. Laakiin macaamiisha ugu muhiimsan waxay ahaayeen kuwo beeralay ah.
Waxaad xiiseyneysaa inaad wax ka barato astaamaha tiknoolajiyada sida tareenka Kirovets K-700, tareenka Kirovets K, tareenka K-9000, tikidhada T-150, MTZ 82 traktor (Belarus).
Mashiinku wuxuu u muuqdaa mid si fiican u shaqeeya dhammaan noocyada shaqada beerta - beeritaanka, beeridda, waraabka. Miisaanka MTZ 1221 iyo raadiye yar yar ayaa suurogeliya in uu kobciyo qaybo yaryar oo adag oo ka mid ah beeraha.
Ma taqaanaa? Iyada oo la adeegsanayo qalabkan, ku dhowaad dhammaan qalabyada loo yaqaan (seeders, mowers, disksators, iwm) oo laga soo saaro wadamada CIS ayaa la isku daraa.
Marka aad ku rakibayso qalab koronto oo dheeraad ah iyo kombuyuutar, 1221 taxane ah ayaa si guul leh ula shaqeeya qalabka soo saarayaasha adduunka.
Faa'iidooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah:
qiimaha - Kharashka aadka u hooseeya ee inta badan moodooyinka caalamka ee tractors. Kaliya shirkadaha Shiinaha ayaa la tartami kara;
kalsooni iyo fududaan adeegga. Dayactirku waa suurtogal in la fuliyo xoogagga teknooloojiyada ee xaaladaha goobaha;
helitaanka qaybo firaaqo ah.
Dhibaatooyinka waa in la xuso:
Awoodda taangiyada yar;
inta badan kulaylka mashiinka, gaar ahaan marka la shaqeynayo cimilada kulul.
iswaafajinta aan dhamaystirneyn ee qalabyada wax soo saarayaasha Yurub iyo Maraykanka.
Waqtiga xaadirka ah, cirifka lagu sharraxay waa calaamada ugu caansan ee caanka ah ee qaybteeda. Mashiinka xooggan, xoog leh, oo aan qabyo ahayn oo uu abuuray khabiiradayada beerahayaga.
Iyada oo la tixgelinayo qiimaha sare ee qalabka dibadda laga keeno, tiro aan ku filneyn oo qaybo dayactir ah iyo adeeg tayo sare leh, iyo la'aanta mashiinnada mashiinka iyo mashiinnada heerka sare, MTZ 1221 ayaa laga heli doonaa shirkadaha beeraha ee dalkeenna muddo dheer.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Mashiinka beeraha 2020